Hab fikir oo guul leh. Sheekadii ka dambaysay kacaankii kubbadda kolayga ee Afrika.
Waa waqti fiican in la ahaado taageere kubbadda kolayga Afrika. Horyaalka Kubadda Kolayga Afrika (BAL) ayaa hadda ku dhawaaqay in xilli ciyaareedkoodii ugu horreeyay uu ahaa guul sidaas darteed waxaa la ansixiyay xilli ciyaareedkii labaad oo la ballaariyay.
Horyaalka kubbadda kolayga ee cusub ee Afrika ayaa sidoo kale ah markii ugu horreysay uu Ururka Kubadda Kolayga Qaranka (NBA) la shaqeeyo horyaal ka baxsan Waqooyiga Ameerika. Tani waxay dad badani u arkaan aqoonsiga kartida dhabta ah ee horyaalka cusub, taageerayaasha, iyo baahida ciyaarta looga leeyahay Afrika.
Ciyaartoyga Kubadda Kolayga Senegal iyo Halyeyga NBA Amadou Gallo Fall ayaa sharaxaya:
"Waxaan ka hadalnaa BAL inuu yahay mashiin korin dhaqaale. Waxay ku saabsan tahay in la arko kaabayaasha dhaqaalaha oo horumaraayo; kaabayaal sida dhismooyinka oo leh garoomo, iyo dhammaan adeegyada aad u baahan tahay si aad u hesho kooxo horyaal ee heer caalami ah. Laakiin sidoo kale in la dhiso kartida dhinaca khibradda.'
Xilli ciyaareedka labaad ee BAL wuxuu 05ta Maarso 2022 ka bilaabmayaa gudaha Dakar, Senegal, guriga xarunta dhexe ee horyaalka.
Sannadka 2022-ka waxa ka qayb galaya 12 kooxood oo naadi ah oo ka socda 12 waddan oo Afrikaan ah, kuwaas ku ciyaaraya guud ahaan magaalooyinka caasimadda Afrika ee Dakar, Qaahira iyo Kigali. Xilli ciyaareedka labaad ayaa ka weyn midkii koowaad, oo waxaa la qaban doonaa 38 ciyaaro muddo afar bilood ah.
"Iyadoo loo marayo qaabkan tartanka ee la balaariyay, waxaan ciyaaro ka badan keeni doonnaa dalal badan oo qaarada ah, taasoo u awoodaysa taageerayaasha cusub iyo kuwa soo laabanaya inay la kulmaan xiisaha horyaalkan caalamka ah si dhow iyo qof ahaan."
Guddoomiyaha Guddiga BAL Anibal Manave
Ciyaarta dheer. Tobankii sano uu ku horumaray BAL
Waxaa la aasaasay 2010, BAL waa iskaashi wadajir ah oo ka dhexeeya Xiriirka Kubadda Koleyga Caalamiga ah (FIBA) iyo NBA.
Sannadkii 2020, barnaamijka Kubadda Koleyga Aan Xuduudda Lahayn, oo la aasaasay 2003, ayaa 10 ciyaartoy Afrikaan ah ku toosisay qabyo qoraalka NBA. Tani waxay dejisay is-beddelka, iyo heerka. Xilli ciyaareedkii 2020-21, rikoor u dhigma 14 ciyaartoy oo Afrikaan ah ayaa kasoo muuqday NBA, oo ku jiro ciyaartoyga caanka ah ee Cameroon Joel Embiid ee Philadelphia 76ers.
NBA waxay soo celisay sama doonka iyo helitaanka xirfad dabiiciga Afrika, iyadoo ka caawinaysa BAL inay tababarto saraakiisha ciyaarta iyo aasaaska fursado isku xiran oo lala yeeshay hawlgalayaasha ganacsatada iyo warbaahinta.
Ku lug lahaanshaha uu NBA ku yeeshay BAL ayaa sidoo kale keenay wareejinta tababarayaasha iyo ciyaartoyda, kaasoo kordhiyay soo jiidashada daawadayaasha gudaha Afrika iyo caalamiga ah labadaba. Ayadoo loo mahad noqaayo siddeed warbaahin iskaashi oo ay dejisay NBA Africa, xilli ciyaareedka koowaad ee BAL waxay gaartey 215 waddan 15 luqadood oo kala duwan ah.
'Taageerada dhaqaale ay kala iibsiga keentay waxaa ka muhiimsan aqoonta, xiriirka iyo khibradda ay u leeyihiin ganacsiyada, kaasoo ka sii kordhaya ee qaaradda iyo u isticmaali doonno si aan u dardargelinno qorshooyinka kobaca ee NBA-da ,' ayuu yiri Williams.
Taageerada sii socota ee NBA, BAL waxay muujisay inay tahay qaab ee ganacsi ahaan guul leh oo la hirgelin karo; iyadoo soo jiidatay indhaha caalamka, soona bandhigtay kartida Afrika.
BAL waxa kale oo ay kobcisaa fursado dhaqaale oo adkeysi leh iyadoo balaarinaysa ciyaaraha iyo madadaalada Afrika iyo soo jiidanaysa maalgashiga caalamiga ah.
Ciyaarta ayaa sii socota…